Ukuhlolwa kwamazinga okushisa nokushisa - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukushisa kwebhayisikili nomswakama kusetshenziselwa ukuhlola nokunquma imingcele nokusebenza kwemikhiqizo noma izinto ngokusebenzisa izinguquko zethempelesha nomswakama njengaphansi kokushisa okuphezulu nomswakama noma ukushisa okuphansi nomswakama.
Izinguquko zemvelo ezintweni ezifana nokushisa nomswakama zinomthelela omkhulu ekusebenzeni kwempahla nokusebenza komkhiqizo. Sigcwalisa lolu vivinyo ngokufaka imikhiqizo noma izesekeli endaweni yokufakelwa, siveze imikhiqizo ekushiseni okuphezulu ngokweqile, kancane kancane sinciphise ukushisa okuphansi, bese sibuyela ekushiseni okuphezulu. Lo mjikelezo ungaphindwa esimweni sokuhlolwa kokuthembeka noma izidingo zamakhasimende.
-FTTH Fibre optic uphonsa ikhebula
Izixhumi zokubhoboza umfutho wokungena emzimbeni （IPC）
-FTTH uphonsa ikhebula izibopho
Izibopho -Aerial noma fixing izisekelo
-ABS ikhebula ngocingo
Ukuhlolwa okujwayelekile kwamazinga kubhekiswa ku-IEC 60794-4-22, EN-50483: 4, NFC-33-020, NFC-33-040.
Sidayisa imikhiqizo emazweni angaphezu kwama-40 emhlabeni, amanye amazwe anezinga lokushisa eliphezulu kakhulu noma liphansi kakhulu, njengeKuwait neRussia. Futhi amanye amazwe anemvula eqhubekayo nomswakama omkhulu njengePhilippines. Kufanele siqiniseke ukuthi imikhiqizo yethu ingasetshenziswa ezimeni zezulu ezahlukahlukene futhi lokhu kuhlolwa kungaba ukuhlolwa okuhle kokusebenza kwemikhiqizo.
Igumbi lokuhlola lilingisa izimo zezulu ezahlukahlukene, ibanga lokushisa eliguquguqukayo lemishini lingu-70 ℃ ~ -40 ℃ futhi ibanga lomswakama lingu-0% ~ 100%, elihlanganisa imvelo emangele kakhulu emhlabeni. Futhi singakwazi ukulawula izinga lokushisa nokushisa komswakama noma komswakama. Imfuneko yokuhlolwa yethempelesha noma umswakama ingahlelwa kabusha ukuze kugwenywe iphutha lomuntu nokuqinisekisa ubuqiniso nokunemba kokuhlolwa.
Lokhu sikwenza emikhiqizweni emisha ngaphambi kokuyethula, nokulawula ikhwalithi yansuku zonke.